Mutemo wedu unotora mazuva makumi matatu. Kana mazuva makumi matatu apfuura kubva zvawakatenga, zvinosuwisa, hatigone kukupa iwe kudzoreredza kana kuchinjana.
Isu hatipe mari yekudzoserwa kweasina kuburitswa.
Kuti uwane chikwereti chekudzoka, chinhu chako chinofanira kunge chisina kushandiswa uye mumamiriro akafanana kuti iwe wakagamuchira. Inofanirawo kunge iri mumapurasitiki epakutanga.
Mhando dzakawanda dzezvinhu hazvigoni kudzorerwa. Zvinhu zvinoparara zvakadai sezvokudya, maruva, mapepanhau kana magazini hazvigone kudzorerwa. Isu hatigamuchiri michero inofambidzana kana yezvinhu zvakachena, zvinhu zvinokuvadza, kana zvinodhaka zvinopisa kana magasi.
Kuti upedze kudzoka kwako, tinoda risiti kana uchapupu hwekutenga.
Ndapota usatumira kutora kwako kumashure.
Isu hatigamuchire chero chinhu chisiri muchimiro chayo chepakutanga chakakuvara kana kushaika zvikamu nekuda kwezvikonzero kwete nekuda kwekukanganisa kwedu kana chero chinhu chinodzoserwa anopfuura mazuva makumi matatu mushure mekutakura.
Kubhadhara (kana zvichibvira)
Kana iwe uchibvumirwa, ipapo kubhadhara kwako kuchagadziriswa, uye chikwereti chichashandiswa kushandiswa kadhi rako rechikwereti kana nzira yokutanga yokubhadhara, mukati mehuwandu hwemazuva.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at sa[email inodzivirirwa]
Vengesa zvinhu (kana zvichibvira)
Chete zvinhu zvemutengo wenguva dzose zvinogona kudzoserwa, zvinosuruvarisa, zvinhu zvekutengesa hazvigone kudzoserwa.
Kusiyanisa (kana zvichibvira)
Isu tinongotsiva zvinhu kana zvakakanganisika kana kukuvara. Kana iwe uchida kuchinjana icho kune icho chinhu, titumire email kune [email inodzivirirwa] kuti uwedzere mirayiridzo.
Kana iyo yakanyorwa sechipo paunenge watengwa uye kutumirwa zvakananga kwauri, uchagamuchira chipo chechipo chekukosha kwekudzoka kwako. Kana imwe nguva yakadzorerwa ichigamuchirwa, chipo chechipo chichakutumirwa kwauri.
Kana chinhu chacho chisina kuiswa sechipo kana chakatengwa, kana chipo ichocho chikava nekutumirwa kunyorerwe ivo pachavo kuti vakupe iwe gare gare, tichatumira kudzorera kune chipo chairo uye iye achawana nezvekudzoka kwako.
Kuti udzore chigadzirwa chako, tumira email ku [email inodzivirirwa] kuti uwedzere mirayiridzo.
Iwe uchava nemhosva yekubhadhara mari yako yokutumira mari yekudzorera chinhu chako. Kutengeswa mari haisi kudzorerwa. Kana iwe uchigamuchira mari yekubhadhara, mari yekudzorera kutengesa ichaderedzwa kubva pamutero wako.
Zvichienderana nezvamunogara, nguva iyo inogona kutora kuti iwe unoshandiswa mutengo kusvika kwauri, inogona kusiyana.
Kana iwe uri kutumira chinhu pamusoro peEUR 75, iwe unofanirwa kufunga nezvekushandisa trackable sevhisi sevhisi kana kutenga inishuwarenzi yekutakura. Isu hativimbise kuti isu ticha gamuchira chinhu chako chakadzoserwa.